I-Cleveland Cottage-Uncedo kunye noMlingiswa
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguDianne
ICleveland Cottage likhaya elikhethekileyo elakhiwa ngasekupheleni kweminyaka yee-1930 okanye ekuqaleni kweminyaka yee-1940. Indlu isandula ukuhlaziywa, kodwa igcina umtsalane wayo wokuqala ngeengcango ezenziwe ngesandla, i-1 'paneli, kunye nemigangatho yepine. Indawo yomlilo yeyona ndawo iphambili yegumbi lokuhlala elibanzi. Umhombiso ubandakanya umsebenzi wobugcisa wokuqala obonisa imiboniso evela kwiDelta yaseMississippi ukusuka kwiintsuku zangaphambili. Iindawo ezikufutshane zibandakanya iDyunivesithi yaseDelta State, iDowntown Cleveland eneevenkile ezininzi kunye neeresityu, kunye neMyuziyam yaseGrammy.
I-cottage inegumbi elinye lokulala kunye negumbi lokuhlambela elinye kwaye ilungele isibini. Nangona kunjalo, inokulala ukuya kuthi ga kubantu aba-4 ukuba ibhedi ye-Murphy kwigumbi lokuhlala iyasetyenziswa.
Ikhitshi lixhotyiswe ngezixhobo ezihlaziyiweyo kunye nazo zonke iziseko: izinto zesilivere, iipleyiti, iiglasi, iikomityi, iimbiza neepani, izinto zokupheka, njl. njl. Ikhitshi likwaxhotyiswe ngomatshini wokuhlamba izitya.
Kukwakho nedesika ebanzi ngasemva kwendlu. Ukongeza kwifenitshala yangaphandle, i-bbq grill kunye nezixhobo zikwabonelelwa.
Elumelwaneni kukho ithala leencwadi loluntu, iFireman's Park, kunye neMississippi Grounds, ivenkile yekofu yendawo.
Ababuki zindwendwe bakho bahlala ngaphakathi kwimizuzu emi-5 yokuqhuba ukuba kukho nayiphi na imeko kaxakeka. Zifumaneka ngefowuni, itekisi okanye i-imeyile kwaye zidla ngokuphendula ngokukhawuleza.